“စီရော်နယ်ဒိုရဲ့လစာကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ”(ကိုယ်တွေ (၁၀) ရက်လောက်ရှာတဲ့ငွေက သူ့ရဲ့ (၁) မိနစ်စာတောင် မရ) – စွယ်စုံသုတ
“စီရော်နယ်ဒိုရဲ့လစာကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ”(ကိုယ်တွေ (၁၀) ရက်လောက်ရှာတဲ့ငွေက သူ့ရဲ့ (၁) မိနစ်စာတောင် မရ)
စီရော်နယ်ဒိုဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကလည်း အခြားကစားသမားတွေ လိုက်မီဖို့အတွက် အတော်ကိုခဲယဉ်းနဲ့ စွမ်းဆောင်မှုမျိုးကို ပြုလုပ်နိုင်တဲ့သူပါ။
လက်ရှိမှာ အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုဟာ ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာခြေစွမ်းပြနိုင်ဆဲပဲ ဖြစ်တာကြောင့် သူကိုလိုချင်နေတဲ့အသင်းတွေကလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်။
တစ်နှစ်ကို လုပ်ခလစာ ယူရိုသန်း ၃၀ အထိရှိနေပေမယ့် သူရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်တော့ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ တန်တဲ့ ကစား သမားတစ်ယောက်လို့ ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ လစာကို မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ တွက်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ တန်ဖိုးကို ပိုပြီးသိသာစေမှာမို့ တွက်ချက်ပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ တစ်ယူရိုပေါက်ကြေးကိုတော့ မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၅၅၀ ကျပ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
? စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ လစာအရ ….
တစ်စက္ကန့်ကို ယူရို ဝ.၉၅ ရတာကြောင့် မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆို ၁၄၇၂ ကျပ်
တစ်မိနစ်ကို ယူရို ၅၇.၁၀ ရတာကြောင့် မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆို ၈၈၅၀၅ ကျပ်
တစ်နာရီကို ယူရို ၃၄၂၄ ရတာကြောင့် မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆို ၅၃၀၇၂၀၀ ကျပ်
တစ်ရက်ကို ယူရို ၈၂၁၉၁ ရတာကြောင့် မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆို ၁၂၇၃၉၆၀၅၀ ကျပ်
တစ်ပတ်ကို ယူရို ၅၇၆၉၂၃ ရတာကြောင့် မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆို ၈၉၄၂၃၀၆၅၀ ကျပ်
တစ်လကို ယူရို ၂.၅ သန်းရတာကြောင့် မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆို သိန်းပေါင်းသုံးသောင်းရှစ်ထောင်ခုနှစ်ရာငါးဆယ်သိန်း တစ်နှစ်ကို ယူရို သန်း ၃၀ ရတာကြောင့် မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆို သိန်းပေါင်း လေးသိန်းခြောက်သောင်းငါးထောင် ရရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တွေတစ်နှစ်စာက သူ့ရဲ့တစ်နာရီစာတောင်မရှိပါလားကွယ်။
ေငြႏွစ္ေထာင္ အေႂကြးေၾကာင့္ ႏြားဘဝနဲ႔ ျပန္ဆပ္ခဲ့ရတဲ့ ကိုသာေမာင္ (ျဖစ္ရပ္မွန္)